शेयर बजारमा मंगलबार सुधार, कुन कम्पनीको कारोबार कस्तो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
(Thursday 21st October 2021)
शेयर बजारमा मंगलबार सुधार, कुन कम्पनीको कारोबार कस्तो ?
प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०७४, मंगलबार
भदौ ६, काठमाण्डौ । साताको पहिलो र दोस्रो दिन लगातार ओरालो लागेको शेयर बजार मंगलबार सुधार भएको छ । दुई दिनमा करिब १७ अंकले घटेको नेप्सेमा मंगलबार दुई दशमलब चार आठ अंकले सुधार आएको हो । बजार बन्द हूँदा नेप्से परिसुचक एक हजार ६ सय १४ दशमलब शुन्य पाँच अंकमा पुगेको छ ।
आइतबार ११ दशमलव ७८ र सोमबार ६ दशमलव ४ शून्य अंकले घटेको बजारमा मंगलबार साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्सेमा सुधार देखिएको छ । मंगलबार नेप्से परिसुचक २ दशमलव ४८ अंकले उकालो लागेर १ हजार ६ सय १४ दशमलव ०५ को बिन्दुमा आएर कारोबार बन्द भएको छ ।
परिसुचक बढेसँगै मंगलबार ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसुचक शुन्य दशमलव ५२ अंकले उकालो लागेर ३ सय ३९ दशमलव ३८ अंकमा पुगेको छ । मंगलबार कारोबारमा आएका आठ समूहमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन र फाइनान्स बाहेकका सबै समूहमा बढेपछि समग्र बजार सुधारोन्मुख देखिएको छ ।
मंगलबार सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूह ११ दशमलव ३६ अंकले उकालो लागेर १ हजार ८ सय ५७दशमलव ६८ अंकमा कारोबार बन्द भएको छ । त्यसैगरी बीमा समूहको परिसुचक ८ दशमलव १५ अंकले, बैंकिङ समूह १ दशमलव ०२ अंकले, विकास बैंक २ दशमलव ८ अंकले, होटल समूह २ दशमलव ८२ अंकले र अन्य समूह ७ दशमलव ५२ अंकले बढेको छ । मंगलबार उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ११ दशमलव ६४ र वित्त समूहको परिसुचक शून्य दशमलव ९६ अंकले ओरालो लागेको छ । नेप्से परिसुचक बृद्धिसँगै मंगलबार कारोबार रकममा पनि बृद्धि भएको छ । सोमबार ५२ करोड २० लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार १ सय ६१ कम्पनीको ७२ करोड ३१ लाख ६६ हजार ६ सय ५१ रुपैया बराबरको कारोबार भएको छ । ११ हजार ६ सय ५० वटाको कारोबारबाट १७लाख ८९ हजार १ सय ४ कित्ता शेयरहरुको किनबेच भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन पावर पार्टनरले अग्रता लिएको छ । यस कम्पनीको ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएको हो । कारोबार रकमका आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः नेपाल बैंक र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स परेका छन् । जसमध्ये हिमालयन पावर पार्टनरको सर्वाधिक ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको ४ करोड ३५ लाखमाथिको शेयर कारोबार भएको छ ।
आज सर्वाधिक कमाउनेमा हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडका लगानीकर्ता रहेका छन् । यसदिन यो कम्पनीको शेयर मूल्य ७ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको ७ दशमलव २२ प्रतिशतले शेयर मूल्य बढेको छ । मंगलबार कारोबारमा सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेडका लगानीकर्ता रहेका छन् । यस कम्पनीको शेयर मूल्य आज ३ दशमलव ९८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
एमालेले बादलको नेतृत्वमा बनायो २१ सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति
काठमाडौं, ४ कार्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) आगामी मंसिर १० देखि १२ सम्म
कुलमानलाई धादिङबाट चिठी “कुलमान तिमी नबोल”
सुदिप सिंखडा कुलमान तिमी नबोल, कुलमान तिमी नहेर, कुलमान तिमी नसुन, तिमी तिम्रा आखाँमा वाहा
मोदीद्वारा कुशीनगर एअरपोर्टको उद्घाट्न, लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनको अपेक्षा
काठमाडौं, ३ कात्तिक । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेशको कुशीनगर जिल्लास्थित कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको
बसुलो प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या, श्रीमान पक्राउ
सल्यान, ३ कात्तिक । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा एक पुरुष पक्राउ परेका छन् ।
पूर्व सचिव खनालको टिप्पणी : आगामी चुनावमा कसैलाई पनि माओवादीलाई मत दिने अवस्था उत्पन्न नहोस
काठमाडौं, २ कार्तिक । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले आगामी निर्वाचनमा कसैलाई पनि माओवादी पार्टीलाई मत
मुग्लिन, २८ असोज : मनकामना केबलकार सेवा दुई दिन बन्द हुने भएको छ । आज
डोटीका शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो
डोटी, २७ असोज । हिन्दू नेपालीहरूको महान् चाड वडादसैंको महाअष्ठिमीका दिन जिल्लाका विभिन्न मठमन्दिर तथा
काठमाडौं, २७ असोज । बाबुबाजेको पालादेखि भेडा र खसीपालन गर्दै आएका प्रेमलाल कोइरालाको टोली यो
बाबुरामले सेयर गरे ओलीको गिनिज बूक रेकर्ड
काठमाडौं, ४ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा
१० बुँदे सहमति ९५ प्रतिशत स्थानमा कार्यान्वयन भैसकेको छ : प्रवक्ता ज्ञवाली (भिडिओसहित)
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । नेकप (एमाले) का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १० बुँदे सहमति ९५ प्रतिशत
ओलीले एमाले महाधिवेशनका लागि चितवनलाई किन रोजे ?
काठमाडौं, ४ कात्तिक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार बागमती प्रदेशको कार्यक्रममा महाधिवेशनको